ရထားပေါ်မှာ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ခဲ့မိရာကနေ ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့အထိဖူးစာဆုံခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ – Trend.com.mm
ရထားပေါ်မှာ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ခဲ့မိရာကနေ ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့အထိဖူးစာဆုံခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ
Posted on June 12, 2018 April 10, 2019 by Noel
ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘေးနားက လူမချောဘူးဆိုရင်တော့ စကားမပြောမိပါစေနဲ့နော် 😜
ဖူးစာဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့ပြောလာရင် ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေး နဲ့သာပြန်ငြင်းလိုက်ပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို စာဖတ်သူတွေအတွက်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီဇာတ်လမ်းက Reader’s digest မှာဖော်ပြထားတဲ့ Anne Hill ဆိုသူ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာရဲ့ ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးရထားစီးရင်း ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ ဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်းကတော့…၁၉၅၀ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်မ ယူအက်စ်ပြည်နယ် Clevelandမှာရှိတဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီမီးရထားစီးပြီးအလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျောင်းပြီးခါစဖြစ်ပြီးရုံးစာရေးနဲ့လက်ရေးတိုကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်စလုပ်နေချိန်ပါ။အပြန်ခရီးမှာတော့မျက်စောင်းထိုးခုံတန်းမှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်စစ်သားကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် စကားလက်ဆုံကျနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရတာအခုမှရထားပေါ်မှာ စတွေ့တာဖြစ်ပြီး ခရီးလမ်းကြောင်းချင်းလည်းတူပုံမရပါ။နောက်တော့ ထိုအမျိုးသမီးလေး နယူးယော့ခ်၊Rochesterမြို့မှာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေတဲ့စစ်သားအမျိုးသား က ရုပ်ရည်လည်းချောမောလို့ ကျွန်မလည်းသတိမပြုမိပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ခဏကြာတော့ သူက ကျွန်မကိုင်ထားတဲ့ရထားအချိန်စာရင်းကို ကြည့်လို့ရမလားမေးပြီး ကျွန်မရဲ့ ဘေးခုံမှာလာထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုကျွန်မအဒေါ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့နေ့လည်စာအတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ ခရီးဆုံးအရပ် Onieda ရောက်တဲ့အထိ
စကားတွေတောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူက ရထားနဲ့သွားရင် ၂နာရီလောက်ကြာတဲ့ Albany မြို့လေးမှာနေတာပါ။ပြီးတော့သူ ကျွန်မကိုဆက်သွယ်မယ်ပြောလို့ လိပ်စာချင်းလဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ သူ့ဆီက ဘာသံမှမကြားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် သူတော့ကျွန်မကိုမေ့သွားပြီ ထင်တယ်လို့တွေးမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ အပတ်စနေနေ့လည်းရောက်ရော ရင်းနှီးတဲ့အသံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သူ့ဆီကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်မလားလို့မေးခဲ့တာပါ။Oneida ကို
သူရောက်လာခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ Kallet ရုပ်ရှင်ရုံမှာ On the Waterfront ဇာတ်ကား အတူကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စစ်အားလပ်ခွင့်အတွင်း ကျွန်မတို့တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ သူက ပြည်ပကို စေလွှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူနဲ့ကျွန်မချစ်သူတွေ ဖြစ်ကာ သူ့ရဲ့ အားလပ်ခွင့်တိုင်း ကျွန်မဆီလာလည်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၅၇ခုနှစ်မှာတော့ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ၅၅နှစ်ကျော်အောင်အတူတူရှိနေခဲ့ပါတယ်။သမီးသုံးယောက်လည်းရပြီး အခုဆိုရင်မြေးတွေလည်းရနေပါပြီ။
Cleveland မြို့ကိုခရီးမထွက်လာခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတော့ ကျွန်မကို ရထားပေါ်မှာတွေ့တဲ့လူစိမ်းတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှစကားမပြောမိဖို့ သတိပေးခံခဲ့ရဖူး ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုနားမထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက် ကျွန်မအရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ် “ဆိုတာလေးပါပဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြန်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပါ။စာဖတ်သူတွေရော ဖူးစာဆိုတာကိုယုံရဲ့လား?
ခရီးသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘေးနားကလူမခြောဘူးဆိုရငျစကားမပွောမိပါစနေဲ့နျော 😛
ဖူးစာဆိုတာတကယျမရှိဘူးလို့ပွောလာရငျ ဒီဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးလေး နဲ့သာပွနျငွငျးလိုကျပါ။ ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျလမျးတဈပုဒျကို စာဖတျသူတှအေတှကျပွနျပွီးမြှဝပေေးမှာဖွဈပွီးဒီဇာတျလမျးက Reader’s digest မှာဖျောပွထားတဲ့ Anne Hill ဆိုသူ အမြိုးသမီးစာရေးဆရာရဲ့ ဆောငျးပါးပဲဖွဈပါတယျ။မီးရထားစီးရငျး ဘေးခငျြးကပျထိုငျခဲ့တဲ့ ကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေး နောကျထပျနှဈနှဈကွာတဲ့အခါ ဇနီးမောငျနှံတှဖွေဈသှားခဲ့တဲ့ အကွောငျး ပွနျလညျပွောပွထားတာပါ။
ဇာတျလမျးကတော့…၁၉၅၀ ခုနှဈအလယျပိုငျးလောကျမှာ ကြှနျမ ယူအကျဈပွညျနယျ Clevelandမှာရှိတဲ့ ဆှမြေိုးတှဆေီမီးရထားစီးပွီးအလညျသှားခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ကြောငျးပွီးခါစဖွဈပွီးရုံးစာရေးနဲ့လကျရေးတိုကြှမျးကငျြသူတဈယောကျအဖွဈအလုပျစလုပျနခြေိနျပါ။အပွနျခရီးမှာတော့မကျြစောငျးထိုးခုံတနျးမှာထိုငျနတေဲ့လူငယျစဈသားကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျ စကားလကျဆုံကနြတောကိုမွငျခဲ့ရပါတယျ။သူတို့ကိုကွညျ့ရတာအခုမှရထားပျေါမှာ စတှတေ့ာဖွဈပွီး ခရီးလမျးကွောငျးခငျြးလညျးတူပုံမရပါ။နောကျတော့ ထိုအမြိုးသမီးလေး နယူးယော့ချ၊Rochesterမွို့မှာဆငျးသှားခဲ့ပါတယျ။သူနဲ့ဘေးခငျြးကပျထိုငျနတေဲ့စဈသားအမြိုးသား က ရုပျရညျလညျးခြောမောလို့ ကြှနျမလညျးသတိမပွုမိပဲမနနေိုငျခဲ့ပါဘူး။
ခဏကွာတော့ သူက ကြှနျမကိုငျထားတဲ့ရထားအခြိနျစာရငျးကို ကွညျ့လို့ရမလားမေးပွီး ကြှနျမရဲ့ ဘေးခုံမှာလာထိုငျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျသူ့ကိုကြှနျမအဒျေါထညျ့ပေးလိုကျတဲ့နလေ့ညျစာအတူစားဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ပွီးတော့ ကြှနျမရဲ့ ခရီးဆုံးအရပျ Onieda ရောကျတဲ့အထိ
စကားတှတေောကျလြှောကျပွောလာခဲ့ပါတယျ။သူက ရထားနဲ့သှားရငျ ၂နာရီလောကျကွာတဲ့ Albany မွို့လေးမှာနတောပါ။ပွီးတော့သူ ကြှနျမကိုဆကျသှယျမယျပွောလို့ လိပျစာခငျြးလဲလှယျခဲ့ကွပါတယျ။
တဈပတျကွာတဲ့အထိ သူ့ဆီက ဘာသံမှမကွားပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ သူတော့ကြှနျမကိုမသှေ့ားပွီ ထငျတယျလို့တှေးမိခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီ အပတျစနနေလေ့ညျးရောကျရော ရငျးနှီးတဲ့အသံတဈခုဖွဈတဲ့ သူ့ဆီကဖုနျးဆကျလာခဲ့ပါတယျ။သူနဲ့အတူရုပျရှငျကွညျ့နိုငျမလားလို့မေးခဲ့တာပါ။Oneida ကို
သူရောကျလာခဲ့ပွီး ကြှနျမတို့ Kallet ရုပျရှငျရုံမှာ On the Waterfront ဇာတျကား အတူကွညျ့ခဲ့ကွပါတယျ။
သူ့ရဲ့ စဈအားလပျခှငျ့အတှငျး ကြှနျမတို့တှဆေုံ့ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ပွီးတော့ သူက ပွညျပကို စလှေတျခံခဲ့ရပါတယျ။နောကျထပျ နှဈအနညျးငယျအကွာမှာတော့ သူနဲ့ကြှနျမခဈြသူတှေ ဖွဈကာ သူ့ရဲ့ အားလပျခှငျ့တိုငျး ကြှနျမဆီလာလညျခဲ့ပါတယျ။၁၉၅ရခုနှဈမှာတော့ လကျထပျခဲ့ကွပါတယျ။ ကြှနျမတို့တှေ၅၅နှဈကြျောအောငျအတူတူရှိနခေဲ့ပါတယျ။သမီးသုံးယောကျလညျးရပွီး အခုဆိုရငျမွေးတှလေညျးရနပေါပွီ။
Cleveland မွို့ကိုခရီးမထှကျလာခငျလှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးငယျကတော့ ကြှနျမကို ရထားပျေါမှာတှတေဲ့လူစိမျးတှနေဲ့ ဘယျတော့မှစကားမပွောမိဖို့ သတိပေးခံခဲ့ရဖူး ပါတယျ။အဲ့ဒီစကားကိုနားမထောငျခဲ့မိတဲ့အတှကျ ကြှနျမအရမျးကိုဝမျးသာမိပါတယျ “ဆိုတာလေးပါပဲ။
ဒီဇာတျလမျးလေးကဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးလေးကို ပွနျပွီးရေးဖှဲ့ထားတာပါ။စာဖတျသူတှရေော ဖူးစာဆိုတာကိုယုံရဲ့လား?
လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ အရည်ချင်းလက္ခဏာများနဲ့ ရှောင်ရန်အချက်များ